လူခေါင်း နှင်. မြွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူခေါင်း နှင်. မြွေ
Posted by Knowledge Seeker on Aug 7, 2012 in Copy/Paste |6comments
ကြာ တော. ကြာ ခဲ. ပါပြီ July 05, 2010 က scienceray ဆို တဲ. website မှာ CHAN LEE PENG ဆို သူ က တင် ထား တဲ. သတင်း ပါ
http://scienceray.com/biology/unbelievable-but-true-story-snakes-with-snake-bodies-but-human-heads/ မှာ သွား ရောက် ကြည်. ရှုနိုင် ပါသည်။
http://www.youtube.com/watch?v=gY58TvQdF_o မှာ လည်း youtube ကနေ ကြည်. နိုင် ပါ သည်။
ဒီ မွေ မှာ မွေ ကိုယ် ရှိ ပြီး လူ ဦး ခေါင်း နဲ.ပါ။ အင်ဒိုနီးရှား တွေက “siluman ular” ဒါမှမဟုတ် “nyai borong” ( မြွေ ဘုရင်မ ) လို. ခေါ် ကြပါတယ်။ ဒေသခံတွေက တော. ဂျင်ဂလော. လို.ခေါ် ပါတယ်တဲ.။ မြွေ လို ရွေ. ရှား သွား လာ ပြီး လူ သံ ထွက် တယ် ဆို ကြပါ တယ်။ သူ. အသံ ဟာ ကြောက်စရာ ကောင်း ပြီး ကျော ထဲထိ စိမ်. သွား တာပဲ လို. ဆို ပါတယ်။
လူအများ ကြီး ကြည်.ကြတော. သူ. ခေါင်း ကို ဆံပင်လိပ် ထဲ ၀ှက်ထား သတဲ.။ အင်ဒိုနီးရှား Tulungagung ခရိုင် အနောက် ဂျားဗား က လူအိုကြီး တစ်ယောက် က မြစ်ဘေးရှိ သူ. အိမ် ဘေး နား က နေ အိမ်မက် အ ရ တွေ. တာ လို. ဆို ပါတယ်။ အိမ်မက် ထဲ မှာ သူ.ကိုကောင်းကောင်းထား ဘို.အသနားခံပြောဆိုခဲ.တယ်လို.လဲ ဆိုပါတယ်။ သွေးထဲကအဟာရ ကို သူ.နည်း နဲ.သူ စားရ တာ သဘောကျ ပါတယ်။ သူ. သ္ခင် ကျွေး တဲ. ဆိတ် သွေး ကို ထိ တောင် မထိ၊ ရွေ.တောင် မရွေ. ပါဘူ တဲ.။
သူ. ကို တွေ. တော. ၉၀ စင်တီ အမြီး ကနေ ကိုယ်ထိ ရှည် ပါတယ်။ သူမ ဟာ ရွှေ ရောင် ဆံပင် ရှိ ပြီး မ ဆန် တဲ. ပုံ ပန်း ရှိ တဲ.အတွက် အမ လို. အသိ အမှတ် ပြု ကြပါ တယ်။ စိတ် ၀င်စား ဘွယ် ရာ အဖြူရောင် မျက်ခုံးမွှေး ရှိ ပြီး စွဲစောင် မှု ရှိ ပြီး စိုက် ကြည်.တတ်တဲ. မျက် လုံးတစ်စုံ ရှိ ပါ တယ် တဲ.။
ပုံပန်း ဟာ ရေသူမ နဲ. တူ သလို၊ 15 – 20 စင်တီ ရှိပြီး ကြာက်မက်ဖွယ် အသက်ရှိ မံမီ တစ်ယောက် အ နေနဲ. ဖေါ်ပြ ကြပြီး၊ ရှည် လျား သော လက်သဲ နှင်. စိုက်ကြည်. တတ်သော မျက်လုံးများ ရှိ ပါတယ်။ အချို. ကတော. နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ခန်. က မံမီ တစ်မျိုး လို. ရုံ ကြည်ကြပါ တယ်။
ဂျင်ဂလော.ကို တွေ.တဲ.အချိန်မှာ ပဲ မလေးရှား ပါဟန်း မှာ စပါးကြီး မြွေကိုယ် နဲ. လူခေါင်း ရှိ တဲ.သတ္တ၀ါ ကို တွေ.ပါသေးတယ်။ လူနဲ. တူတဲ. ပါစပ် တစ်ပေါက်၊ မျက်လုံး တစ်စုံ နဲ. ဆံပင် မွှေး ရှည် များ ပါ ရှိ ပြီး ရှုံ.တွ နေ တဲ. သက်ကြား အို ပုံ ပေါက်နေ ပါတယ်။ မြွေသတ္တ၀ါ ထူး တစ်ကောင် နဲ. ပိုတူပါတယ်။ ခေါင်း အောက် မှာ သေချာ ကြည်.ရင် ပိန်လှီတဲ. လက် တွေ တွေ. ရမှာ ဖြစ်ပြီး ထူးချား တဲ. မုတ်ဆိတ် ဖြူ ကို လည်းတွေ.ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
Malaysian aborigines (or Orang Asli) တွေက ဖမ်းဆီး ရ ခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုအမ တွေ.ခဲ.ပေမဲ. အမကို သာဖမ်းမိခဲ.ပါတယ်။ အဲ.ဒီမြွေ မ က သူမကို တောင် ပေါ် ကို လွှတ်ပေး ဘို. တောင်ပန်ခဲ.တယ် လို.ကောလဟာလ ပြောဆို ကြပါတယ်။ ပြီးတော. မြွေဖို ကို သူမအား လာ ကယ် ဖို. ခေါ်ခဲ.တယ်လို.လဲဆို ကြပါတယ်။
This snake hasahuman-like head withasnake body. It’s called “siluman ular” but some of the Indonesians called it “nyai borong”,aname given to “a queen” fromasnake species. The locals called it “Jenglot”. It was allegedly said that this incredible snake moved likeasnake while making human sound. This sounds scary and sends chill down my spine.
When too many people looked at Jenglot, she’ll burry her head inside the curl. Her keeper, an old man who first found it near the river beside his house in Tulungagung District, western part of Java, Indonesia said that he found this unusual snake by the dream. The snake also pleaded with him in the dream to treat her well. Jenglot would prefer to get the nutrients of the blood with its own way. It neither moved nor touched on the fresh animal blood (e.g. goat) her keeper used to feed her.
When found, Jenglot’s body was measured around 90 centimetres from her body to her tail. It was recognized asafemale snake by its long blonde hair andawoman-like appearance. Interestingly, it was also found that it has two white eyebrows lengthwise, along with her attractive staring eyes on her head.
As Jenglot’s appearance is similar to that mermaid, it has described asacreepy, living mummy measuring 15-20centimetres in length, together with her long nails and staring eyes. To some people, they believe that Jenglot isatype of mummy, dating back 300 years old.
In conjunction to Jenglot’s discovery, one strange creature withapython body ofasnake andahuman head was found inasmall town in Pahang, Malaysia. It hasamouth,apair of eyes andalong hair just likeahuman, but its appearance looks likeawrinkled old person, or more exactly it appears to beasnake monster. While examining closely, it was observed that it hasapair of skinny legs just beneath its head, but the most notable feature is its white hoary beard.
It was reported to be captured by Malaysian aborigines (or Orang Asli). They said they found two beasts, female and male, but they could only manage to capture the female one. Rumour had spread that this snake even begged them to release her to the mountainous area, and some people said that the snake was attempting to summon the male snake monster to come to rescue her.
ဂရိဒံနာရီထဲက မက်ဒျူဆာ များလား
ကိုယ်လုံးက စပါးကြီးမြွေလိုလို စပါးအုံးမြွေလိုလိုပဲဗျ
တကယ်အဖြစ်အမှန်များလား ၊ အခုမှ ကြားဖူးလို့ပါ ၊ ညံ့ပ ။
ဒါကို မယုံချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကလည်း
အဲဒီလူဂျီးက ဒါမျိုးတွေ တွေ့ဖူးဘူးလား သိပါဘူး …